လူ ၃ ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ ယနေ့နံနက် အမြန်လမ်းယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု - Cele Platform
ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ နံနက်(၀၃း၀၀) အချိန်ခန့် က နေပြည်တော်-ရန်ကုန်လမ်း မိုင်တိုင် အမှတ်၁၆/၆-၁၆/၇ အကြားတွင် ဟင်္သတ-မန္တလေးခရီးသည် ကျား/မ ၄၅ဦးတင်ဆောင်လာသည့် ရာဇာအောင် Express တိမ်းမှောက်ခဲ့ကြောင်း အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ယာဉ်မောင်း ဦး တင်ထွန်းဦး၄၅နှစ် ချမ်းမြသာစည်မြို့ နယ် မန္တလေးမြို့ နေသူမောင်းနှင်လာပြီး ကျား/မ ၄၅ဦး တင်ဆောင်လာသည့် Express. ယာဉ်သည့် 7C/—- ရာဇာအောင် ဟင်္သတ-မန္တလေး ခရီးသည်ယာဉ်သည် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းယာဘက်သို့ တိမ်းမှောက်ခဲ့ရာကျား၂ဦး၊ မ ၁ ဦးသေဆုံးပြီး ကျား၁၆ ဦး၊ မ ၁၂ ဦးဒဏ်ရာရရှိသဖြင့် အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့အမှတ်(၃) စခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ ဝင်များနှင့် အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ များ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ် နေရာနှင့်အနီးတဝိုက် မိုင်တိုင် ၁၅ မှ ၂၀ အကြား နေရာများတွင် လမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များ ရှိသည်ဟု ယူဆရသဖြင့် ခရီးသွား ပြည်သူများ အန္တရာယ် ကင်းဝေးစေရေး သတ်မှတ်အရှိန်နှုန်း အတိုင်းသာ သတိပြု မောင်းနှင်ကြပါရန် သတိပေးဖော်ပြထားကြောင်းသိရသည်။Myanmar_Online_News
ယနေ့ စကျတငျဘာလ ၉ ရကျနေ နံနကျ(၀၃း၀၀) အခြိနျခနျ့က နပွေညျတျော-ရနျကုနျလမျး မိုငျတိုငျ အမှတျ၁၆/၆-၁၆/၇ အကွားတှငျ ဟင်ျသတ-မန်တလေးခရီးသညျ ကြား/မ ၄၅ဦးတငျဆောငျလာသညျ့ ရာဇာအောငျ Express တိမျးမှောကျခဲ့ကွောငျး အမွနျလမျးမကွီးရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးမှ သိရသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ ယာဉျမောငျး ဦး တငျထှနျးဦး၄၅နှဈ ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ မန်တလေးမွို့နသေူမောငျးနှငျလာပွီး ကြား/မ ၄၅ဦး တငျဆောငျလာသညျ့ Express. ယာဉျသညျ့ 7C/—- ရာဇာအောငျ ဟင်ျသတ-မန်တလေး ခရီးသညျယာဉျသညျ အရှိနျမထိနျးနိုငျဘဲ လမျးယာဘကျသို့တိမျးမှောကျခဲ့ရာကြား၂ဦး၊ မ ၁ ဦးသဆေုံးပွီး ကြား၁၆ ဦး၊ မ ၁၂ ဦးဒဏျရာရရှိသဖွငျ့ အမွနျလမျးမကွီးရဲတပျဖှဲ့ အမှတျ(၃) စခနျးမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ အထောကျအကူပွုအဖှဲ့မြား ကူညီဆောငျရှကျပေးလကျြရှိကွောငျးသိရသညျ။
အဆိုပါ ဖွဈစဉျ နရောနှငျ့အနီးတဝိုကျ မိုငျတိုငျ ၁၅ မှ ၂၀ အကွား နရောမြားတှငျ လမျးပိုငျးဆိုငျရာ အားနညျးခကျြမြား ရှိသညျဟု ယူဆရသဖွငျ့ ခရီးသှား ပွညျသူမြား အန်တရာယျ ကငျးဝေးစရေေး သတျမှတျအရှိနျနှုနျး အတိုငျးသာ သတိပွု မောငျးနှငျကွပါရနျ သတိပေးဖျောပွထားကွောငျးသိရသညျ။Myanmar_Online_News